बुवा ऋषिले अन्तिम सा`स लिंदै गर्दा संगै थिए रणवीर, छोराको बिहे गरेर म*र्ने इच्छा थियो ऋ`षिको ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/बुवा ऋषिले अन्तिम सा`स लिंदै गर्दा संगै थिए रणवीर, छोराको बिहे गरेर म*र्ने इच्छा थियो ऋ`षिको !
बलिउड अभिनेता ऋषि कपूरको निध`न भएको छ । उनको ६७ वर्षको उमेर बिहीबार बिहान निध`न भएको हो । यसअघि बुधबार मात्रै अभिनेता इरफान खानको निध`न भएको थियो । बलिउडले लगातार दुई हस्ती गुमा`एको हो ।
उनी क्यान्सर रोगबाट पीडित थिए । कपूर गएको सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा क्यान्सरको उपचार गराएर फर्किएका थिए । उनी क्यान्सरको उपचारका लागि अमेरिकामा एक वर्ष बसेका थिए । गएको फेब्रुअरीमा उनको स्वास्थ्यमा पुनः समस्या देखिएको थियो । क्यान्सरसँग जुधिरहेका उनलाई स्वासप्रस्वासमा पनि समस्या भएकाले मंगलबार अस्पताल भर्ना गरिएको दाइ रणधीरले बताएका थिए ।
ऋषि कपूरले सन् १९७३ मा बबी चलचित्रबाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेका थिए । उनले बालक`लाकारका रुपमा श्री ४२० र मेरा नाम जोकर चलचित्रमा काम गरेका थिए । ऋषि कपूरका छोरा रणवीर कपूर बलिउडका हालका स्टार अभिनेता हुन्। उनको नि`धनप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै अभिनेता अमिताभ बच्चनले आफू ‘क्षत`वि`क्षत’ भएको उल्लेख गरेका छन् । बच्च`नले ट्वीट गरेका छन्, ‘उनी गए…ऋषि कपूर…गए…भर्खरै बिदा भए.. म खण्डि`त भएँ ।’
अस्पतामा अन्तिम सास लिँदै गर्दा उनको वरिपरी श्रीमती नीतु कपूर तथा छोरा रणवीर र छोरी रिद्धि`मा`सहित परिवारका सदस्य रहेको जनाइएको छ । उनको अन्तिम चलचित्र इमरान हाश`मीसँगको द बडी हो । उनी अभिनेत्री दीपिका पादु`कोणसँग उनी हलिउड चलचित्र द इन्टर्नको हिन्दी रिमेकमा काम गर्ने तयारी थिए ।
पछिल्लो समय रणवीरका पिता ऋषि कपुरले उनीहरुको बिबाह गरिदिन लागेको बताएका थिए । ऋषिले यो जोडी छिट्टै बिबाह बन्धनमा बाँधिएको हेर्ने रहर भएकाले बिबाह गरिदिन लागेको बताएका थिए ।